Guddoomiyaha Gobalka Mudug oo ka hadlay Amniga Gaalkacyo – Radio Daljir
Juunyo 16, 2018 11:39 b 0
Iyadoo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug uu soo hagaagayo Amaankeeda ayaa waxaa hawlgalo ka wadda Ciidamo ka kala tirsan Puntland,Galmudug iyo dawlada federalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Xassan Maxamed Khaliif ayaa ka hadlay Amaanka gobolka Mudug wuxuuna sheegay Mudadii lasoo dhaafay in waxbadan iska bedeleen isla markaana xiligan uu marayo meeshii ugu wanaagsanayd.
Xasan Abgaalo ayaa sidoo kale wuxuu hambalyo iyo bogaadin u jeediyey Ciidamada hawlgalada ka wadda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kuwaasoo uu sheegay in la,aantood gobolka Mudug uusan noqdeen Nabad Galyo.
Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inuu socdo Qorshe lagu doonayo in gobolka Mudug lagu wareejiyo Hal Maamul oo kaliya kaasoo ka talinaya guud ahaan gobolka Mudug Balse Gudoomiyuhu ma xusin Maamulka uu noqonayo.
Ugu danbayn Xassan Maxamed Khaliif ayaa ugu baaqay shacabka gobolka Mudug inay la shaqeeyaan ciidamada xoogga Dalka Soomaaliya ee gobolka Mudug iyo sidoo kale ciidamada isku dhafka ah ee gobolka Mudug ka wadda hawlgalada Habeen iyo Maalin.